HOUSE RENT IN7MILES (ID-1164) အား မရမ်းကုန်း တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
House rent in7miles, Mayangone Township. Land area - 6200 sqft. 3200 sqft, 1 Stories house, organized by Living-room, Three Master Bed-rooms, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. House has five air-conditioners.
Asking Price - 25 Lks (Nego)
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ၇မိုင်ရှိငှားရန်ရှိသော တစ်ထပ်လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါသည်။ မြေအကျယ် - ၆၂၀၀စတုရန်းပေရှိပြီး အိမ်အကျယ် - ၃၂၀၀ စတုရန်းပေရှိပါသည်။ အိမ်ခန်းအကျယ် ဧည့်ခန်း၊အိပ်ခန်းကျယ် သုံးခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် နှစ်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖွဲ့စည်းပါဝင်ပါသည်။ လေအေးပေးစက် ငါးလုံးအသင့်တပ်ဆင်ပါရှိပါသည်။ လုံးချင်းအိမ်၏လစဉ် ငှားရမ်းခမှာ - ၂၅သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
အမည်: HOUSE RENT IN7MILES (ID-1164)